Nnwom 37 NA-TWI - Ɔdebɔneyɛfo ne ɔtreneeni hyɛbere - Bible Gateway
Nnwom 36Nnwom 38
Nnwom 37 Nkwa Asem (NA-TWI)
37 Mma wo werɛ nnhow wɔ nnebɔneyɛfo ho; mma w’ani mmmere wɔn a wɔyɛ bɔne. 2 Wɔbɛhyew te sɛ sare a awo. Wobewu te sɛ afifide a atwintwam. 3 Fa wo ho to Awurade so na yɛ papa. Tena asase no so na bɔne amma wo so.